आईसिटि मेलामा शनिवार ‘व्लायक डे सेल’को कार्यक्रम, उत्पादनमा ८० प्रतिशतसम्मको छुट
काठमाडौं । भृकुटीमण्डपमा सञ्चालन भइरहेको आइसिटि मेलामा शनिवारलाई ‘व्ल्याक डे सेल’का रुपमा मनाइने भएको छ । शनिवार
सुबिसुको नयाँ वर्ष अफर, हजार रुपैयाँमा केवल टिभि र इन्टरनेट, एन्टिभाइरस पनि सित्तैमा
काठमाडौं । केबल टेलिभिजन, इन्टरनेट र नेटर्वक सेवा प्रदायक कम्पनी, सुबिसु केवलनेटले ग्राहकका लागि नयाँ वर्ष अफर ल्याएको छ । यो योजना अन्तर्गत ग्राहकले हजार रुपैयाँमा ब्राडव्याण्ड इन्टरनेट, केवल टेलिभिजन,
सामसङ्ग मोवाइलको एसएसली सुपरस्टार अफर, १५ प्रतिशत छुट, डिष्टिङ्कशन ल्याए थप छुट
काठमाडौं । सामसङ्ग मोबाइलका लागि नेपालको आधिकारीक वितरक इन्टरनेशनल मार्केटिङ्ग सर्भिस प्रा.लि (आइ एम एस)ले एस.एल.सी सुपरस्टार अफर अघि
के फेसबुकको स्मार्टफोन यही साता लञ्च होला ? बिहिवार फेसबुकको सस्पेन्स पत्रकार सम्मेलन
काठमाडौं । के यही साता फेसबुक फोन लञ्च होला ? यस्तो अड्कालवाजी किन पनि गर्न थालिएको छ भने फेसबुक
माइक्रोसफ्टको विण्डोज ९ बजारमा आउँदै डेस्कटपलाई बाईबाई, इन्ट्रयाक्टीभ युआईलाई वेलकम
न्युयोर्क । लामो समयदेखि पिसि अपरेटिङ सिस्टम (ओएस) डेस्कटप सुविधा राख्दै आएको माईक्रोसफ्टले आगामि ओएसमा यो सुवीधा हटाउने छाँट देखाएको छ । विण्डोज ब्लु नाम दिईएको नयाँ संस्करणको ओएसदेखि यस्तो
गुगल एन्ड्रोइडको विकल्प खोज्दै सामसङ्ग, नयाँ स्मार्टफोनमा टाइजन सफ्टवेयर प्रयोग हुने
लण्डन । स्मार्ट फोनको भीडमा आफनो फरक पहिचान बनाएको कम्पनी सामसुङ्गले गुगलको एन्ड्रोइड सिस्टमको विकल्प खोज्ने भएको छ ।
आजदेखि सर्वसाधरणलाई पनि फोरजी वाइम्याक्स इन्टरनेट, कति पर्छ महसुल ? विवरणसहित
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले बुधवारदेखि सर्वसाधरण उपभोक्ताकालाई पनि चौथो पुस्ताको वाइम्याक्स प्रविधिमा आधारित इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । यसअघि कम्पनीले यस्तो सेवा संस्थागत ग्राहकलाई मात्रै उपलब्ध गराउँदै आएको
नोकियाले बजारमा ल्यायो सवैभन्दा सस्तो विण्डोज फोन, बजारमा बर्चश्व पुर्नस्थापितको प्रयास
लुमिया ५२० को टुजी टक टाईम १४.८ घण्टा र थ्रिजी टक टाईम ९.६ घण्टा छ भने इयरफोन लगाएर ६१ घण्टासम्म गित सुन्न सकिन्छ नयाँदिल्ली । नोकियाले
युट्युवबाट फेसबुकलाई थपियो चुनौती, फेसबुकको सदस्य एक अर्ब, युट्युव हेर्ने पनि अर्ब नाघे
न्युयोर्क । अनलाईन भिडियो सेयरिङ वेबसाईट युट्युबका नियमित प्रयोकर्ताहरुको संख्या एक अर्ब नाघेको छ । युट्युव संचालन गर्ने कम्पनी गुगलकाअनुसार हालसालै युट्युवबले यो संख्या पार गरेको हो । कम्पनीकाअनुसार मासिक
एचडिसी ब्राण्डका ट्याव्लोइड, फ्याबलोइड र मोवाइल नेपालमा, मूल्य सातदेखि १८ हजारसम्म
काठमाडौं । इन्कटेक मोबाइलले एचडिसी ब्राण्डका ट्याबलोइड, फ्याबलोइड र मोबाइल फोन बजारमा ल्याएको छ । ताम्राकार कम्प्लेक्सको पसल न ६९ बाट पहिलो पटक बिक्रीमा ल्याएको इन्कटेक इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमीटेडले बजारमा
के सस्ता होलान स्मार्टफोन ? गुगल अध्यक्ष एरिकले भने ५० डलरमा पाइनेछ स्मार्टफोन
नयाँदिल्ली । आगमी दिनमा स्मार्टफोन अझ स्मार्ट हुने छन्, साथसाथै सस्ता पनि हुनेछन् । सिएनबीसी आवाजसँग कुराकानी गर्दै गुगलका
सामसङ्ग ग्रान्डको नेपाली बजारमा विक्री सुरु, मूल्य साढे ३७ हजार, शुन्य किस्तावन्दीमा पनि
काठमाडौं । सामसुङ्ग ग्यालाक्सी ग्रान्डको आइतवारदेखि नेपाली बजारमा बिक्री सुरु भएको छ । नेपालभर सामसुङ्ग मोवाइल फोन बिक्री वितरण गर्ने एक मात्र अधिकार प्राप्त इन्टरनेशनल मार्केटिङ्ग सभिसेज (आईएमएस)ले यो बिक्री
७० करोड काण्डपछि संचार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले दिए राजीनामा, संसदमा पुग्यो जानकारी
७० करोडको घूस लेनदेन अडियोबारे विजयप्रकाश मिश्रको बयान : '१७ महिनाअघि, मन्त्रालयमै भएको हो'
सञ्चार मन्त्रीले 'हामी' भनेर मागेको घूसमा सरकारका को को पर्छन्? कांग्रेसले ओलीसँग माग्यो जवाफ
त्रिभुवन विमानस्थलमा रोबोट: पर्यटकलाई अभिवादन गर्नेदेखि भिसा प्रक्रिया जानकारी गराउनेसम्म
७० करोडको टेप प्रकरण बारे बास्कोटा: नेकपाका नेताले भ्रष्टाचार गर्छन् भन्ने कुरा नै तार्किक छैन
सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको 'अपशब्द' प्रति निजामती कर्मचारी युनियनले गर्‍यो विरोध
सुनको भाउ लगातार रेकर्डतर्फ, बिहीबार तोलाको ७७ हजार ६ सय, चाँदी पनि ९ सय १५ पुग्यो